Ngwa - Wuxi Boln Laser Tech Co., Ltd.
Akara teknụzụ metụtara ụlọ ọrụ akụkụ ụgbọ ala, belụsọ maka akara akara ọnụọgụ, nkọwa, nke nwekwara ike ijikwa ndị na-eweta ngwaahịa ma nweta ikike ngwaahịa, wee jiri ya na ngwaahịa ndị adịgboroja na ndị dị ala.
Njikwa ndị na-eweta ngwaahịa na-egosipụtakarị akara akara usoro, aha na logos na akụkụ akpaaka, wee jikọta ya na nchekwa data, nyochaa ọnụọgụ na ọtụtụ dịgasị iche iche, na-emecha nweta ọrụ nke ịjụ na nyochaa njikwa ngwaahịa na ndị na-ere ahịa.
Anti-adịgboroja ọrụ tumadi na-egosi na-akanye akara Oghere Usoro ọgụgụ na pụrụ iche ndịna enweghị usoro, na-enyere ọ bụla akụkụ nwere ike ozugbo ghọtara, ma ọ bụ na-elele site na kọmputa dị ka marking nọmba, nke ọma ịchịkwa na-abụghị ndị mbụ ngwaahịa mgbasa.
Ihe esere ama akara anaghị adị mfe ihichapụ, na-amụba ikike adịgboroja.
Iwusi njikwa ikike ngwaahịa, izute ihe achọrọ maka ịkpọghachi ngwaahịa nkwarụ, ma chọpụta akụkụ dị iche iche ozi nchịkọta na njirimara njikwa.
Anyị marking igwe nwere ike akara nkọwapụta, Oghere Usoro ọgụgụ na ogbe nọmba na ngwaahịa elu, eji na electronic mmiri, transformer, electronic njikọ, circuit iba, plastic, metal, batrị, doro anya plastik, keyboard, obere engine na mgba ọkụ.
Ọtụtụ ihe dị mkpa na bọọdụ okirikiri chọrọ ka akara ma zoo na ụlọ ọrụ eletrọniki, na-edekarị akara akụkụ, oge mmepụta na ụbọchị nkwakọba ihe. Kasị emepụta na-eji silk ihuenyo ebi akwụkwọ ma ọ bụ labeling, na ụfọdụ na-eji laser marking igwe.
Ngwa anyị na-ewepụta teknụzụ na-enweghị akara kọntaktị nke nwere ike izute ihe achọrọ maka njirimara ngwaahịa na ụlọ ọrụ eletrọniki. Ma ọ bụ obere nguzogide, ikike, njikọta, ma ọ bụ nnukwu mgba ọkụ na akụkụ, igwe anyị nwere ike ịlele okwu, ọnụọgụ, akara-akara na eserese.
Ejirila teknụzụ laser na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa. Ngwa akụrụngwa laser nwere ike itinye akara ụbọchị mmepụta, ụbọchị mmebi, ọnụọgụ ogbe, akara, koodu mmanya na mmiri mmiri na nkwakọ ngwaahịa siri ike. Ka ọ dị ugbu a, ọ bara uru maka ọtụtụ ihe nkwakọ ngwaahịa, dị ka igbe katọn, karama PET, karama iko, ihe nkiri mejupụtara na igbe tin.
Enwere ike iji akụrụngwa laser na ụtaba, ọ bụghị naanị maka ịchọpụta ozi gbasara ngwaahịa sịga (dịka sịga Carton ma ọ bụ sịga sịga sitere na ụlọ ọrụ ụtaba), kamakwa maka akara akara dị ka mgbochi adịgboroja, njikwa ahịa na nsụgharị logistic.
A na-eji teknụzụ akara akara n'ọtụtụ ebe na waya na eriri ọrụ, na-emetụta akara aha, akara na ọnụọgụ na ngwaahịa USB nwere nkọwa na nha dị iche iche. Ọbụghị naanị akara mgbe akụrụngwa pụtara, ma ọ bụ mgbe eriri ikuku; ọ bụghị naanị na eji akara akara ọsọ ọsọ ọsọ, ma ọ bụ na pallet dị iche, akụrụngwa laser nwere ike ịlele site n'akụkụ dị iche iche, akara nbipụta ogo 360, mechie, gbagọrọ agbagọ, warara, wdg; ma ọ bụ akara akara, nkọwa, ụbọchị site na ala, akụkụ na elu.
BOLN si laser marking kwekọrọ n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ USB na ngwa ngwa pụrụ iche chọrọ, dị mkpa iji kaa akara na usoro mmepụta ngwa ngwa (500m / min). Ihe akara akara laser na-eme ka okwu ndị ahụ ghara iyi ma gbanyụọ mgbe eriri ndị ahụ na-efe. Obere njirimara bụ 0.8mm. Ngwa anyị nwere ike ịlele eserese dị iche iche, akara ngosi na asambodo ọkọlọtọ, dị ka TUV, UL, CE, ma nwee ike ijikọ na ngwa elektrọnik ndị ọzọ, dị ka igwe na-ekpo ọkụ, igwe nchacha, ngwa ngwa, wdg, yana ijikọ na sistemụ njikwa arụmọrụ.
Waya na USB
A na-eji akara laser eme ihe n'ọtụtụ ebe na akụrụngwa ngwaike, ihe ndị nwere ígwè ígwè gụnyere ígwè, ọla kọpa, igwe anaghị agba, ọlaedo, alloy, aluminom, ọla ọcha na ígwè oxides niile.
Laser marking igwe nwere ike akara dị iche iche ederede, Oghere Usoro ọgụgụ, ngwaahịa nọmba, mmanya-koodu, QR code, mmepụta ụbọchị, na ike nweta skipping marking. Okwu akara na eserese doro anya ma sie ike, enweghị ike ihicha ma gbanwee ya, nke bara uru maka ogo ngwaahịa yana nsuso ọwa, ma nwee ike igbochi ire ere ngwaahịa ụbọchị, mmegide adịgboroja na esemokwu ọwa. .
The elu-nkenke e ji mara anyị igwe bụ nnọọ adabara akara obere na dị oké ọnụ ahịa mgbanaka, olu na ndị ọzọ na ọla, nweta wear-eguzogide na-adịgide adịgide marking. Eme akara nkeonwe na-ewu ewu na ndị ahịa na ụlọ ọrụ ọla, dị ka akara akara pụrụ iche, ekele na eserese ahaziri iche. Tụkwasị na nke ahụ, igwe laser nwere ike ịkọ ihe dị iche iche, ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara, sliver, gold.